Siyaasadda Arrimaha Khaaska ah - Bulshada Cadaalada
Siyaasadda Asturnaanta ee Shabakadda
waxaa ka go'an ilaalinta asturnaantaada. Nagala soo xiriir haddii aad qabto wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah oo ku saabsan isticmaalka macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaanan ku farxi doonaa inaan ku caawino.
Adigoo isticmaalaya boggan ama / iyo adeegyadayada, waxaad ogolaaneysaa Hirgelinta Macluumaadka Shakhsiyeed sida lagu sharxay Siyaasaddaan Khaaska ah.
Qeexitaannada loo adeegsado Siyaasaddan
Mabaadii ilaalinta xogta aynu raacno
Xuquuqda aad leedahay ee ku saabsan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Macluumaadka Shakhsiyeed ee aanu kaa ururino adiga kugu saabsan
Sida aan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Yaa kale oo ay heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed
Sida aan u hubino xogtaada
Macluumaadka ku saabsan "cookies"
Macluumaadka Shakhsiga - wixii macluumaad ah ee la xidhiidha qof dabiici ah oo la aqoonsaday ama la aqoonsan karo.
processing - Qalab kasta ama hawlgal kasta oo lagu sameeyo faahfaahin shakhsiyeed ama ku saabsan xogta shakhsi ahaaneed.
Mawduuca xogta - qof dabiici ah oo xogtiisa shakhsi ahaaneed lagu shaqeynayo.
Child - qof dabiici ah oo ka hooseysa da'da 16 da'da.
Anaga / annaga (ha ahaato mid weyn ama aan ahayn) -
Mabaadiida Ilaalinta Macluumaadka
Waxaan balan qaadaynaa inaan raacno mabaadiida ilaalinta macluumaadka soo socda:
Wax-soo-saarku waa sharci, caddaalad, daahfuran. Hawlaha wax qabadkayagu waxay leeyihiin sababo sharci ah. Waxaan marwalba tixgelineynaa xuquuqdaada inta aan ka shaqeyneyno macluumaadka shakhsiga Waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan Gaadiidka marka la codsado.
Hawlgalku wuxuu ku kooban yahay ujeedada. Dhaqdhaqaaqyadeenu waxay ku habboontahay ujeedada loogu talagalay Macluumaadka Shakhsiyeed.
Hawlgalka waxaa lagu sameeyaa macluumaad yar. Waxaanu ururineynaa oo qallineynaa tirada ugu yar ee Macluumaadka Shakhsiyadeed ee looga baahan yahay ujeeddo kasta.
Hawlgalku wuu xadidan yahay wakhti go'an. Ma xafideyno xogtaada shakhsiyadeed mudo ka badan intii loo baahnaa.
Waxaan samayn doonaa waxkeena ugu fiican si aan u hubino saxsanaanta xogta.
Waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican ee loo hubin karo sharafta iyo sirta xogta.
Mawduuca Xogtu wuxuu leeyahay xuquuqahan soo socda:
Xaq u lahaanshaha macluumaadka - macnaha waxaad u leedahay inaad xaq u leedahay inaad ogaato in Macluumaadka Shakhsiyeed lagu shaqeynayo; xogta laga soo ururiyey, laga helayo meesha laga helo iyo sababta iyo qofka loo shaqeynayo.
Xaqqa helitaanka - macnaha waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaadka laga soo ururiyey / lagaa doonayo. Tan waxaa ka mid ah xaqa aad u leedahay inaad codsato oo aad hesho nuqulka macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Xaq u lahaanshaha saxitaanka - macnaha waxa aad xaq u leedahay inaad codsato hagaajin ama ereyga macluumaadkaaga shakhsiyeed ee aan sax ahayn ama aan dhameystirnayn.
Xaq u lahaanshaha ereyga - macnaha xaaladaha qaarkood waxaad codsan kartaa macluumaadkaaga shakhsiyeed in laga tirtiro diiwankeena.
Xaq u yeelanshada xakamaynta farsamaynta - macnaha marka shuruudaha qaarkood ay khuseeyaan, waxaad xaq u leedahay inaad xakameyso Hawlaha Macluumaadka Shakhsi ahaaneed.
Xuquuqda inaad diiddo inaad ku shaqeysid - macnaha ereyada qaarkood waxaad xaq u leedahay inaad diidid Qodobka Diiwaangelinta Shakhsiyeed, tusaale ahaan kiiska si toos ah suuqgeynta.
Xaqa aad u leedahay in lagu diido farsamaynta autism - Macnaheedu waa inaad xaq u leedahay inaad diiddo Qalabaynta automated, oo ay ku jiraan sheyga; iyo in aan loo hoggaansamin go'aanka ku-salaysan kaliya wax-qabadka Kaabsashada. Xuquuqdaan waxaad ku tababaran kartaa mar kasta oo ay jirto natiijo ka dhalatay soo bandhigid saameyn sharci ah oo ku saabsan ama si weyn u saameeya adiga.
Xaq u yeelista karti-gelinta xogta - waxaad xaq u leedahay inaad heshid macluumaadkaaga shakhsiyeed ee qaabka mashiinka-la akhrisan karo ama haddii ay suurtagal tahay, si toos ah uga wareejinta hal-hawleed mid kale.
Xaqa aad u leedahay inaad soo xareyso cabasho - haddii ay dhacdo inaan diidno codsigaaga Xuquuqda Helista, waxaan ku siin doonaa sabab sababta ah. Haddii aadan ku qanacsaneyn habka codsigaaga loo xalliyay fadlan nala soo xiriir.
Xaq u yeelashada gargaarka maamulka kormeerka - taas oo macnaheedu yahay inaad xaq u leedahay caawimaadda hey'adda kormeerka iyo xaqa loo leeyahay daaweyn kale oo sharci ah sida dalbashada magdhawga.
Xuquuqda inaad ka noqoto oggolaanshaha - waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto wixii oggolaansho ah ee lagaa siiyo si aad u sameyso macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Macluumaadka aan ururino
Tani waxay noqon kartaa cinwaankaaga e-mail, magaca, cinwaanka biilka, cinwaanka guriga iwm - inta badan macluumaadka muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah bixinta sheyga / adeegga ama si loo kordhiyo khibradaada macaamiisha annaga. Waxaan badbaadineynaa macluumaadka aad na siiso si aad u falanqayso ama aad wax uga qabato hawlaha kale ee bogga internetka. Macluumaadkan waxaa ku jira, tusaale ahaan, magacaaga iyo cinwaankaaga emailka.
Macluumaadka si toos ah ayaa kugu soo ururiyey
Tan waxaa ku jira macluumaadka si toos ah loogu kaydiyo cookies iyo qalabka kale ee fadhiga. Tusaale ahaan, macluumaadkaaga alaabta dukaamada, cinwaankaaga IP, taariikhdaada dukaameysiga (haddii ay jirto wax iwm) iwm. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa sidii loo wanaajin lahaa khibradaada macaamiisha. Markaad adeegsaneyso adeegyadayada ama fiiri waxyaabaha ku jira boggeena, hawlahaaga ayaa laga yaabaa in la diiwaan geliyo.
Macluumaadka ka yimid lamaanahayaga
Waxaan ka soo ururinnaa macluumaadka lamaanayaasheenna la aamini karo iyagoo xaqiijinaya in ay haystaan ​​sabab sharci ah si ay macluumaadkaas noogu wadaagaan. Tani waa macluumaad aad si toos ah u siisay ama ay ku soo ururiyeen adiga sababo kale oo sharci ah. Liiskaan waa: NCS Trust, EFL Trust.
Macluumaadka guud ee la heli karo
Waxaan soo aruurin karnaa macluumaadka adiga kugu saabsan ee si guud loo heli karo.
Waxaan isticmaalnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si aad:
adeeggayaga siiyaan. Tani waxaa ka mid ah, tusaale, diiwaangelinta koontadaada; ku siinaya alaabo kale iyo adeegyo aad codsatay; adoo ku siinaya waxyaabo xayeysiin ah oo ku saabsan codsigaaga iyo in lagula xiriiro marka la eego alaabooyinka iyo adeegyada; isgaadhsiinta iyo isdhexgalkaaga; iyo in laguu sheego isbedelada adeeg kasta.
hagaajinta khibradaada macmiilka;
fulinayaan waajibaad sharci ama qandaraas;
si loola xiriiro barnaamijka dhalinyarada ee adiga ama ilmahaagu ka diiwaangashan yihiin;
ku saabsan sheekooyinka guusha ee barnaamijyada dhalinyarada;
si aad u taageerto adiga ama ilmahaaga barnaamijka dhalinyarada
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaan sababo sharci ah iyo / ama ogolaanshahaaga.
Sababtoo ah in la galo qandaraaska ama fulinta waajibaadka qandaraaska, waxaanu hirgelinaynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ujeedooyinka soo socda:
inuu kuu aqoonsado;
si ay kuu siiyaan adeeg ama kuu soo diraan / kuu soo bandhigaan badeeco;
si ay ula xiriiraan midkood iibka ama qaansheegashada;
Iyada oo ku saleysan dano sharci ah, waxaanu hirgelinnaa Macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ujeedooyinka soo socda:
inay kuu soo diraan dalabyada kuu gaarka ah * (annaga iyo / ama la-hawlgaladayada si taxadar leh loo doortay);
si loo maamulo loona falanqeeyo saldhigeena macmiilka (dabeecadaha wax iibsiga iyo taariikhda) si loo hagaajiyo tayada, kala duwanaanta, iyo helitaanka alaabta / adeegyada la bixiyo / la bixiyo;
si loo sameeyo su'aalo ku saabsan qanacsanaanta macaamilka;
Ilaa iyo intaad nala soo socodsiisay wax kale, waxaan tixgelineynaa in aad bixisid alaab / adeegyo oo la mid ah ama la mid ah taariikhda wax iibsashada / dabeecada wax lagu fiirsado si ay noogu noqoto danta sharci ahaaneed.
Ogolaanshahaaga waxaanu hirgelineynaa Macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ujeedooyinka soo socda:
inay kuu soo diraan wargeysyada iyo ololaha ololaha (naga iyo / ama la-hawlgaladayada si taxadar leh loo doortay);
ujeedooyin kale waxaan ku weydiinay ogolaanshahaaga;
Waxaanu Hirgelinnaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed si aad u buuxiso waajibaadka ka soo kordhay sharciga iyo / ama isticmaal macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee ikhtiyaari ah ee sharcigu bixiyo. Waxaanu xaq u leenahay inaan sheegno macluumaadka shakhsiyadeed ee la ururiyey iyo in la isticmaalo wixii macluumaad ah ee noocaas ah. Waxaan isticmaali doonnaa xogta ka baxsan xadka u yaala Nidaamkan kaliya marka la aqoonsan yahay. Ma xafidno macluumaadka biilka sida faahfaahinta kaararka deynta. Waxaan keydsan doonnaa macluumaadka kale ee iibsiga ah ee lagaa soo ururiyey adiga kugu saabsan ilaa inta loo baahdo ujeedooyin xisaabin ama waajibaadyo kale oo ka soo jeeda sharciga, laakiin aan ka dheerayn 5 sano.
Waxaan sameyn karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed oo ah ujeedooyin dheeraad ah oo aan halkan lagu sheegin, laakiin waxay ku xiran yihiin ujeeddada asalka ah ee xogta la ururiyey. Si arrintan loo sameeyo, waxaan xaqiijin doonaa in:
xidhiidhka ka dhexeeya ujeedooyinka, xaaladda iyo dabeecadda Macluumaadka Shakhsiyeed waa ku haboon yahay Horumarin dheeraad ah;
Hawlgalka dheeraadka ah wax uma yeeli doono danahaaga iyo
waxaa jiri doona badbaado ku habboon ee wax qabadka.
Waanu kuusoo wargalin doonnaa wax kasta oo Hirgelinta iyo ujeedooyin kale.
Yaa kale oo heli kara macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Kuma wadaagno macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dadka ajnabiga ah. Macluumaadka Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan waxaa ku jira xaalado qaarkood oo la siiyay lamaanaheenna la aamini karo si loo helo adeegga suurtogalka ah ee suurtogalka ah ama si loo wanaajiyo waayo-aragnimada macaamiisha. Waan wadaagnaa xogtaada:
Bixinta lacag bixinta. Waxaa lagugu wargelinayaa habkan.
NCS Trust - barnaamijyada NCS oo keliya.
EFL Trust - barnaamijyada NCS oo kaliya.
Waxaannu kaliya ka shaqeynaa Iskaashatada la-hawlgalayaasha ee awood u leh inay xaqiijiyaan heer ku filan ee ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Macluumaadkaaga Shakhsiyeed waxaan u soo bandhignay dhinacyada saddexaad ama saraakiisha dawladda markaan si sharci ah ku waajibin lahayn. Waxaa laga yaabaa in aan shaaca ka qaadno macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dhinacyada saddexaad haddii aad ogolaatay ama haddii ay jiraan sababo kale oo sharci ah.
Waxaannu ku dadaalnaa inaan ku ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan u adeegsaneynaa nidaamyada amaanka ah ee isgaarsiinta iyo wareejinta xogta (sida HTTPS). Waxaan u adeegsaneynaa anonymizing iyo aragtida meesha ku habboon. Waxaanu kormeernaa nidamyadeena u nugul nabarka iyo weerarrada.
Inkasta oo aan isku dayeyno sida ugu wanaagsan ee aan u hubin karno amaanka macluumaadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan balanqaadaynaa inaan u sheegno hay'adaha ku haboon ee jebinta macluumaadka. Waxaan sidoo kale kuu sheegi doonaa haddii ay jirto khatar ku iman karta xuquuqdaada ama danahaaga. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan si macquul ah u awoodi karno si looga hortago jebinta amniga iyo in la caawiyo mas'uuliyiinta waa in jebin kasta uu dhaco.
Haddii aad xisaab noogu leedahay, xusuusnow inaad haysatid magacaaga iyo sirtaada sirtaada.
Ma dooneyno in aan ururinno ama ogaanno macluumaadka carruurta ka yar da'da 14 adoo adeegsanaya shabakadeena. Marka loo eego hay'ad samafal oo dhallinyaro ah, waxaa jira shuruud ah in la ururiyo macluumaadka ku saabsan da'yarta oo xiiseynaya, ama ka qaybgalaya barnaamijyadayada. Waalidiinta waxaa lala xiriiraa macluumaadkaan marka macluumaadka waalidka la bixiyo.
Kukiyada iyo tiknoolajiyada kale ee aan isticmaalno
Waxaan isticmaalnaa koobiyaal iyo / ama tiknoolajiyada la midka ah si loo falanqeeyo habdhaqanka macaamiisha, maamusho websiteka, dhaqdhaqaaqa dadka isticmaala, iyo inay ururiyaan macluumaadka ku saabsan dadka isticmaala. Tani waxaa loo qabtaa si shakhsi ahaaneed loo kobciyo loona hagaajiyo khibradaaga.
Macmiilku waa foorm yar oo qoraal ah oo lagu kaydiyo kombiyuutarkaaga. Kukiyada waxay ku kaydiyaan macluumaadka loo isticmaalo in lagu caawiyo sameynta goobaha shaqada. Kaliya waxaan heli karnaa cookies oo ay abuurtay shabakadeena. Waxaad koontadaada ku xakameyn kartaa heerka shabakadda. Doorashada ku-meeritaanka kakoobka ayaa yarayn karta isticmaalkaaga shaqooyinka qaarkood.
Waxaan u isticmaali karnaa cookies for ujeedooyinka soo socda:
Kukiyada loo baahan yahay - Kukiyadaas ayaa looga baahan yahay adiga inaad awood u yeelatid inaad isticmaashid qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee boggayaga internetka, sida soo galitaanka. Kukiyadaas ma soo ururiyaan macluumaad shakhsiyeed.
Kukiyada shaqeynta - Kukiyadaas waxay bixiyaan shaqeyn ka dhigaysa isticmaalka adeegkayaga aad u haboon oo ka dhigaya sifooyin gaar ah oo shakhsi ahaaneed. Tusaale ahaan, waxay xusuustaan ​​magacaaga iyo e-mailka foomamka faallooyinka si aadan dib ugu noqonin macluumaadkaan marka xigta marka la faalloodayo.
Kukiyada Analytics - Kukiyadaas waxaa loo isticmaalaa si ay ula socdaan isticmaalka iyo waxqabadka boggeena iyo adeegyadeena
Kukiyada xayeysiiska - kakoobyadan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo xayeysiisyo adiga iyo danahaaga. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaalaa in la yareeyo tirada jeer ee aad aragto xayeeysiin. Waxaa badanaa lagu dhejiyaa websaydhka shabakadaha xayeysiinta leh ee fasaxa shirkadda boggeeda. Kukiyadaas waxay xasuusnaadaan inaad booqatay website-ka iyo macluumaadkaan waxaa lala wadaagaa ururada kale sida xayeysiinta. Inta badan bartilmaameedka ama kakoobyada xayeysiisku waxay ku xiran yihiin hawlaha goobta ee ay bixiso hay'adda kale.
Waxaad ka saari kartaa cookies oo lagu keydiyay kombiyuutarka adiga oo adeegsanaya goobaha shabakadaada. Beddel ahaan, waxaad xakameyn kartaa qaar ka mid ah koobiyeyaasha xafladaha 3rd iyada oo la adeegsanayo barxad farsamo oo gaar ah sida Optout.aboutads.info or Youronlinechoices.com. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kukiyada, booqo allaboutcookies.org.
Waxaan isticmaalnaa Google Analytics si aan u cabbirno taraafikada boggeena internetka. Google waxay leedahay Siyaasadeeda Khaaska ah oo aad dib u eegi karto halkan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo raadinta Google Analytics, booqo Google Analytics bogga bogga.
Hay'adda kormeerka ee macluumaadka gudaha England - https://ico.org.uk - ICO - Xafiiska Guddoonka Macluumaadka
Element Society - wac 0114 2999 214 si aad ugala hadasho macluumaadka.
Waxaanu xaq u leenahay inaanu isbeddel ku sameyno Siyaasaddaan Khaaska ah.
Isbeddelkii ugu dambeeyay waxaa la sameeyey 21 / 05 / 2018.